Isibani Esiphezulu Sokuqhafaza se-China se-2019 sase-China se-Ex-proof Lamp yomakhi wendawo nefektri | UTaiyi
Imodeli TY / TLED201 TY / TLED202
Luhlobo luni lomshayeli wesistimu owenza isibani sokukhanyisa sezindawo eziyingozi ezinamandla angcono okuklama amandla, angashayela amalambu aphezulu okukhanyisa?
I-Class I ne-Class II zivunyelwe
Usayizi omncane, idizayini entsha isebenzisa ubuchwepheshe be-LED bamuva. Usayizi omncane, impilo yesevisi ende nokusebenza kahle okuphezulu.
Kulula ukufaka-itheku yamandla ohlangothini ikuvumela ukuthi u-wire njengoba kudingeka. Izintambo nezingwegwe ezifakwe ngaphambilini zenza ukufakwa kube lula. Mane nje ubeke isibani esivele sikhona noma wenze ukufakwa okusha. Umkhiqizo unesisindo esingamakhilogremu angu-8.52 kuphela futhi kulula ukuwuphatha.
Ukukhanya okukhanyayo, okuqondile futhi okuhlala isikhathi eside-i-120 degree kukhiqiza ukukhanya okubanzi okufanayo. Ama-LED ayi-100,000 asindisa inkathazo yokushintsha ama-bulbs-izindlu ze-aluminium nge-sink yokushisa ephezulu ivikela umshayeli we-LED. Ukushiswa okungcono kokushisa kuqinisekisa impilo ne-LED ende. Ukukala okuqinisekisiwe kanye newaranti ukuphepha okufakwe ohlwini kanye newaranti eqinile engu-1.
Lezi zibani ubuchwepheshe be-LED bakamuva. Uma kuqhathaniswa namalambu endabuko aphezulu e-bay, mancane futhi asebenza kahle, abukeka kangcono, ahlala isikhathi eside futhi kulula ukuwafaka.
Faka esikhundleni se-Class 1 yakudala neClass 2 ngama-LED asebenza kahle kakhulu. Yonga imali futhi wehlise imvamisa yokufakwa esikhundleni kweglobhu ngamahora angama-100,000 wama-LED alinganisiwe. Ukulungiswa nakho kulungele ukufaka okusha. Gcina imali futhi uthuthukise ukukhanya.
Langaphambilini Ukuqhuma kwesikhukhula se-Square Alluminium Alloy
Olandelayo: IChengdu Taiyi IEC Isitifiketi Sokuqhuma kwe-LED nge-IP67